सपनाका बिम्बहरु – हिमालयन ट्रिबुन
म तेस दिन अलि ढिलो कक्षामा पुगेछु। मेरो पहिलो दिन थियो राम सागर राम स्वरुप बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरमा। म पहिलो दिन अलि लजाएको थिए क्लास छिर्दा। अगाडिका बेन्चमा कौसिको गमलामा एकै नासको सयपत्री फुलेझै छात्राहरु खद्दरको सारी लाएर बसेका थिए। तिनिहरुले मलाई हेरे पछि म बबुरो लाजले झनै चाउरी परे। कक्षामा राजेन्द्र बिमल सरको नेपालीको लेकचर चली रहेको थियो। अरु त कोनि उनी कान्ट कान्ट भनिरहेका थिए। सायद उनी इम्यानुअल कान्ट बारे चर्चा गर्दै थिए। क्लासमा विद्यार्थीहरु नेपालको संसदमा मोदिको भाषण सुन्दाझै मन्त्रमुघ्ध थिए।बिमल सरको विशेषता पनि हो सबैलाई लठ्ठ पार्ने।मलाई देखेर राजेन्द्र सरले भन्नू भयो,” यो त मान्छे पढ्ने ठाउँ हो। बाघ हैन।”
म अलि मोटो र डल्लो थिएँ। त्यस पछि त झनै ठेउकाहरु हास्न थाले। ठेउकिहरु झनै हास्न थाले सेता दात ङिच्च देखाएर। अब म बर्षाको पानीले फर्सिको लहरा गलेझै गले। तर किशोर मन के गल्थ्यो। ठेउकिहरु मध्य को राम्री छ तुलना गरि हाल्यो मनले। कोहि छ कि भबिस्यलाई बचेको। तर अह कोंहि त्यहाँ बघिनीहरु छन जस्तो लागेन सुलुत्त परेकी राम्री।पछि सेक्सन “A” छाडि “B” तिर पढ्न थाले किनकी त्यहाँ “A” भन्दा धेरै राम्रा राम्रा ठेउकिहरु थिए। ०४६ मंसिर को पारिलो घाम लागेको दिन थियो। ०४५ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी अद्यापी कायमै थियो। एक छिन पछि सबै विद्यार्थीहरु त्यहाँ बाघमा परिणत भए। बाहिर एक हुल नेबिसंघका सद्स्यहरु नारा जुलुस लाउदै थिए। बाहिर विद्यार्थीहरुको चहलपहल बढिरहेको थियो। ” ल आज पढाई हुदैन।” एउटाले भन्यो। एक छिन पछि क्लासमा महेन्द्र यादब, उज्ज्वल बराल, अजय पौडेलादी छिरे। उनिहरुले पन्चायत बिरुद्ध भाषण गरे।”
ल अब हाम्रो ब्यबस्था आएपछी सबै सिंह हुनेछन। बिरालो चितुवा हुनेछ। चितुवा बाघ। ” पहिलो गाँसमै झिंगा भनेझैं बिमल सरको कान्टको लेक्चर पुरै सुन्न पाईएन। अनि लागियो पछि पछि विद्यार्थी नेताको। त्यसमा पछि पछि जनमोर्चा, अखिल र मसालसंग सम्बन्धित विद्यार्थिहरु पनि थपिए। नारा जुलुस लाउदै गयौं। फेरि एकै चोटि समय अन्तरालमा जान्छु। मस्त निद्रामा छु। बिउझिन खोज्छु तर सक्दिन। चल्चित्र लेखनमा समय अन्तराललाई Dissolve भन्छन क्यार! जहाँ एक पछि अर्को दृश्य overlap भएर आउँछ। अब म जान्छु तलतिर एकाएक २०५२ तिर। लुडोको गोटि एकाएक ९८ नम्बरमा परेर सर्पको मुखमा परे जस्तै। म त बाघबाट चितुवा भएछु। मेरा सहपाठीहरु चाहिँ धेरै जसो स्याल र ब्वाँसो भएछन्।” हामी त अब जङ्गल पस्ने भने। मान्छेको हुलमा बसेर कहिल्यै सिंह बन्न सकिँदैन। यी मान्छेहरु बेद पाठ गर्छन् । मूर्तिलाई पुज्छन। यिनिहरुको पछि लागेर कहिल्यै सिंह बन्न सकिँदैन। बरु जङ्गल तिर पसेर यिनिहरुलाई टोक्न थालियो भने चाडै सिंह भैनेछ।” उनिहरुले भने।म फेरि समय अन्तरालमा जान्छु। सपना न हो। जता पनि पुर्याईदिन्छ।
०६३ तिर म त बनढाडे भएछु। अब एता जङलका स्याल र ब्वाँसाको मान्छेहरुसंग सम्झौता भयो। अब उनिहरुले मान्छेहरुलाई नटोक्ने भए। ब्वाँसा र स्याल पनि मन्छेहरु सङ मिलेर काम गर्न थाले। अब ब्वाँसा र स्यालले पनि बागमती किनारमा बेद पढ्न थाल्यो। ब्वाँसा र स्यालहरु रमाएर बस्न थाले। उनिहरु भन्न थाले अब हामिले गिता पाठ गर्न पाउनु पर्छ। बिना गिता पाठ मोक्ष हुदैन। उनिहरुले आफ्नो माग राखे। मान्छेहरु उनिहरुलाई गिता सिकाउने पक्षमा थिएनन। तर मान्छेहरुको केही लागेन। गङा नदि तरेर मान्छेको र स्याल अनि ब्वाँसाहरुको प्रतिनिधि आयो। स्याल र ब्वासाहरुले भने, “मान्छेले पाठ गरेको हामी मान्दैनौ। बरु तपाईनै बाच्नुहोस।” “ल ठिकै छ। यदि मान्छेहरुले माने भने म पाठ गरेर सुनाउछु । “, प्रतिनिधिले भन्यो। उसले मान्छेहरुको सहमतिमा १२ वटा श्लोक सुनायो। “राम्रो भएछ भने अरु पनि सुनौला।” प्रतिनिधिले भन्यो। त्यस पछि उनिहरुले दुईवटा महागिता सम्मेलन गरे।
मान्छे र फ्याउराहरु मिलेर जनाबेद लेखे। यो जनाबेद लेखुन्जेल म लुते बिरालो भैसकेछु। किनभने गङा नदि तरेर आएको प्रतिनिधिले जनाबेद लेख्न पाईन भनेर मुसा छाडन बन्द गर्यो। मुसा खान नपाए पछि म त दुब्लो भएछु। सहर तिर मान्छे भन्दै थिए नाकबन्दी लाग्यो रे! फ्रेन्ज काफ्काको मेटा मोर्फोसिस जस्तै म बाघबाट लुते अनि दुब्लो बिरालो भएछु। म सम्झिन्छु पहिलो दिन राराब गएको दिन। तेस दिन पनि नाकाबन्दि नै थियो। अहिले पनि छ। म सपनामै मान्छे बन्ने कोसिस गर्छु। तर सक्दिन। फेरि समय अन्तरालमा जान्छु। देक्छु मान्छे हरु सबै अस्पतालमा छन। एउटा स्यानो नदेखिने किरा छ। त्यो एकै छिनमा अजङ्गको भै दिन्छ। त्यो मान्छेको शरीरमा प्रबेस गर्छ। राती फेरि स्याल र ब्वासाहरु कराउँदै छन। एकै छिनमा ती एम्बुलेन्सको धोनिमा परिणत हुन्छन। त्यो किरा भन्छ कि अब हामी हौ यो बिस्वको सासक।मान्छेहरुले हामी जिबहरुलाई धेरै पल्ट धोका दिएका छन। देवताहरुले राक्षसहरुलाई ढाटेर अमृत पान गरे जस्तै मान्छेहरुले ईभोलुसनको क्रममा हामिलाई ठगेर आफुमात्र मान्छे बने। हामी ठगिएको ठगियै। जर्ज अर्वेलको Animal Farm मा पनि बक्सर( Boxer) ले सारै दु:ख पाएर मर्छ। तिमि मान्छेलाई त हामी देख्न सक्छौ तर बबुरा तिमीहरूले मलाई देख्न सक्दैनौं । अब हाम्रो शासन। मान्छे हाम्रो गुलाम। स्याल र ब्वासाहरुले पूरा गर्न नसकेको साम्यबाद हामी ल्याउछौ। मार्क्सवाद न आए पनि मास्कबाद त आएको छनी सारा बिस्वमा। हो यहि हो हाम्रो बिजय! हाम्रो सत्ता।
म बडो सकस गरि ब्युझे। कस्तो दुस्वप्न!!